Date My Pet » 3 Soso-kevitra ho an'ny An Amazing fifandraisana
Fifandraisana no zavatra mahavariana dia afaka manana. Fa tahaka ny rehetra ny zava-dehibe eo amin'ny fiainana izy ireo mitaky be dia be ny asa. Tsy maintsy manao asa azo antoka mba hihazona ny firaisana mahafinaritra. Fa ny zavatra tsara dia ny hoe amin'ny fiovana tsotra vitsivitsy isika, dia manome antoka tsara kokoa ary indrindra indrindra ho sambatra kokoa eo amintsika sy ny firaisana ny olona tiantsika isika. Ity misy soso-kevitra telo fotsiny mba hanampy hihazona fifandraisana lehibe:
Communication dia manan-danja ny fifandraisana misy. Miresaka sy hisokatra amin'ny namany. Raha toa ka tsy hisokatra amin'ny namany rehefa rehetra no hisokatra amin'ny? Aoka izay tsapanao, tsy tian'ny olona aza ny fomba mety ho tsapanao, ka namela azy ireo handeha avy any. Ny zavatra ratsy kokoa azonao atao dia ny mitandrina zavatra taona indray ary avy eo nidina ny tsipika nipoaka tanteraka ny zavatra tokony ho nilaza taona maro lasa izay. Raha misy olona tena tia anao izy ireo miasa amin'ny alalan'ny zavatra rehetra Ho aminao, na dia mitondra azy ireo fotoana. Aoka ho marin-toetra, ary amin'ny farany no mampifanatona bebe kokoa fa tsy bebe kokoa ankoatra.
Ataovy ny firaisana ara-nofo ny zava-drehetra Side Going Strong
Rehefa afaka kelikely, ny lafiny ara-nofo ny fifandraisana dia afaka manomboka hihena hatramin'ny andro teo aloha rehefa tsy ampy ny tsirairay. Asehoy ny tia fa mbola be dia be ny firaisana ara-nofo 'ny alalan' mividy sexy atin'akanjo na fotsiny amin'ny fanaovana ny make-up iray fomba. Red molotra. Smoky maso. Ho azy ireo mbola te anao, satria mbola manao ambany izany rehetra.
Ho tsara fanahy
Efa namaky lahatsoratra fiarahana maro izay milaza ny olona tokony hitondra azy ireo hoe mba hihazonana azy ireo ho mazoto. Dia toa ka ratsy ny ahy. Sady koa anie, inona no zavatra tena ny olona milaza fa mitady? Miaraka ny vazivazy, tsara fanahy ny olona iray izay toa malaza indrindra valiny. Ary indraindray aho dia mieritreritra izany no tsy mety amin'ny fiarahana farihy. Misy olona maro koa mitafy saron-tava izany hampitsahatra ny tenany mitady toy ny doormat. Tsara fanahy no toa nahazo Rep ratsy araka ny efa malemy izay raha ny marina dia mahery indrindra ny fitaovana rehefa fifandraisana. Ny hafanana izay avy amin'ny olona iray izay malemy fanahy, tsara fanahy ary fantatrao fa noho ny tombontsoa tsara indrindra tsy azo outdone. Ka ho tsara fanahy amin'ny namanao, ary izy ireo ho valin-katsaram-panahy. Raha tsy manao izy ireo dia tsy mendrika ny fotoana. Aza mampandefitra nisy olona mendrika ho an'ny olona rehetra sy ny fitiavana ho tonga any am-baravarana, ary dia ho tsara kokoa noho izany ve ianao vao azony atao sary an-tsaina ho.